Gareen maqaa qabsootiin Asmaraarraa ilmaan Oromoo sobaa baate, wayee koraa hawaasa Oromoo Atlaantaa laalchisee maal jedhu laata? | Oromia Shall be Free
bilisummaa November 13, 2016	13 Comments
“HOGGANTOOTA OROMOO” JECHUUN,,
MAAL JECHUUDHAA ??????
Wal ga’iileen qabsoo Oromoo qajeelchuuf ykn araara buusuuf jedhamee gaggeeffamaa jiru irraa akka nama tokkotti gammachuu hin qabu. Ummati kiyyas gammachuu irraa akka qabaatu hin fedhu. Maaliif jennaan, adeemsa isaatu warra gabrummaa waggaa 150 irraa baratee furmaata waliif soqu osoo hin taanee, fonqolchaa fi saamicha dhiiga ijoollee irratti tapha taphatamu waan ta’eef. Ani holola gaggeessaa hin jiru. garuu beektoonni keenya gadi deebi’anii waan furmaataaf nuuf ta’uu wallaalani karaa hin taanee yennaa tarkaanfatan arguun hedduu nama qaanfachiisa.
Wal ga’ii londoniif maallaqa meeqatu ba’ee ? furmaata maaliitu argame??? Isa boooda waaltu itti fufee ? warri waan kana yaadan itti milkaa’anii abdii ummataaf dhiheessan qabuu ? isaan mari qaama hundaa hirmaachisu jedhanii ega qopheessanii , inni Atilaaltaatti of waamu kunimmoo maalii ? maaliif durmaan yaada tokko hin qabaannee ? waan akkasii akka itti hin fufneef abdiin ykn wabiin maalii ? kana adda baasanii ilaaluu barbaachisa. inni amma atilaaltaatti gaggeffamaa jiru dolaara meeqa fixe ? bu’aan isaa maal taa’aa ? ammatti anaan kan natti mul’atuu , qabsichi bakka ga’ee jiru irraa itti fufsiisuuf maal gochuu qabnaa ? qofaatu furmaata jedheen fudha. Akka kanaan Doolaarri akka malee badaa jiru kun meeshaa fi qallaba waraanaa osoo bitee karaa nuuf hin gabaabsuu ? qeerroo Biyya keessaa dhumaa jiruuf wal ga’iileen lameen of tuulummaa irratti calqisan kun furmaata maalii fidu ? sa’aatii kanatti maaltu nurraa eegama ? kan amma itti jirruu kanaa ? Ummati Oromoo Biyya keessaa fi alatti qeerroo waliin dhaabbachuu akka qabu waamicha kanneen taasisaa turan, yaa’ii fi mariin qabamanii argamuun maal irraatii ? maallaqa waliitti guuraa jedhamee kan fiigamaa ture dhiifamee, har’aa wal ga’ii fi durgoof sochiin jiru maal irraatii ?
Isa dhugaa dubbachuuf,,,Oromoon dimokiraatawaa ofiin jenna malee , keessa hin jirru. OROMOON warra gadaan bulu jenna malee, keessa keenya hin jiru. beektoonni keenya qaamni sadaffaan ka biroo ammoo maal akka qopheeffatan arguuf teenya. Dhugaa hedduu nama qaanfachisa. Waggaa 5 fi 10 jedhanii shira diinaa raawwachiisuuf imaluun hedduu nama gaddisiisa . beektoonni keenya haalaa fi wareegama baasuu jibbaaf callisanii jiru malee, rakkoo guddaan dhalootaaf ta’aan isaanidha . beektoota yennaan jedhu muraasa . kaleessa beektoonni biyya alaatti jiganii jiran maaliif qabsoo kana keessatti sagalee tokkon hin hirmaatan ? jennee of gaafachaa fi walii keenya gaafachaa turre. Har’a deebii quubsaa argannee jirra.dhiigaan oromoo ta’uun gonkumaa amala habashummaa akka hin injifannee ifatti argaa jirra. Warri waan kana of keessatti injifachuu hin dandeenye, wareegamaa fi dhiiga ijoollee bishaanitti makuun hin hafu.
Warri waan gaggeeffamaa jiru kana irraa abdii guddaa horatan waa hedduu jechaa fi katabaa jiru. ani akka nama tokkotti ofitti amanamummaan gorsuu , waa tokkollee akka hin jirreedhaa. Waan abdii qabaatu tokkollee hin jiru. shira harka dheeraa ABO irraa ummata galagalfatanii hojii biraa itti fufu qofaatu mirkanaa’aa jira. Wal ga’iin furmaata jedhamee gaggeeffamu hundinuu gonkumaa bu’aa Oromoof fidu miti. amma beekumsaa fi muuxannoo keenyaa hojjachaa hin jirru. Waan dursuu qabu hin dursine. Hoggana qabsoo oromoo kanneen ta’aniif jibbi wayyaanee fi nafxanyaa qabu keenyarraa adda ta’uu qaba.hanguma diinaa kana jibbina taanaan kun fayyummaa miti. diina caalaa hojjannee jigisuuf deemna taanaan kunis maraatummaadha. Karoorri ba;uu bifa kanaan ilaalamuu qaba. Hoogganoota qabsoo bakka dhabsiifnaa jedhanii saganteeffachuun, kakuu waliif seenuun oromummaadhaafii ???????maallaqi adeemsa kanaaf ba’uu dhuguma kiisha oromoo keessaa walitti bu’aa ?? maallaqi kun maaliif qabsoof olchinaatti hin luucca’uu ?
Maaliif qeerroo ittiin hin ijaarru ? qeerroo ofii hogganaan maaliif barbaadu ? Hogganni Oromoo jedhamu kun boruu Oromoo bakka bu’ee haasaa wayyaanee waliin taa’amuuf dubbachuu danda’aa ? Ormoon yoom bakka isaan buufate ? ani namoota fayyaalessuummaan gama hundaan arreedaa jirtan , ni hojjannaatti qabsoo ummata keessanii gufachiiftuu ykn osoo hin beeknee nama waliin hiriirtanii diina gargaartuu keessa ilaalladhaa .
jaarsummaan kamuu jaarsumaan xumurama malee, galii kaayyoo ofiif jaarsummaa barbaachuun miti. Oromoo ofiin jennaan Oromoo ta’anii argamuudha. Amala habashummaan gonkumaa adeemsa Oromummaan walii galuun hin jiraatu. Oromoon bubbee waliin bubbiisuu waggaa 150 boodallee barachuu dhabee dhagaadhaa. Beekumsii fi dandeettiin gabrummaa keessaan dantaa ofiif nama fiigsuu dhugumatti maraatummaadhaa yaa firaa.
Previous Iccitii Abukaatootaa kana beektuu Laata??! (criminal defense)
Next Leencoo Lataa “Yakkiniin an ABO keessatti dalage, adabbiin isaa silaa du’a jedha”
How come the talkative and endlessily bubling dude who has just emerged recently from OPDO’s domain dares to control and mess up with Oromo Liberation Struggle?Especially at this era ! Have we fallen down to the pit to that extent?
Juwar Mohanned listed all persons he has ever met and had coffee together or whom he was taken pictures together(what he does here and there for show off) as his cabinets/minsters and shamelessly put himself at the uppermost.Under his “Dergue members” he generously(he could have even deny them that-because he’s the Almighty) assigned the Oromo political organizations to certain duties of his choices.Did they ever ask for it?Or you can just do it because you’re their master!Calling together few people,mainly from one area(with exception of some naives ignorant of the scheme)and inaugurating one’s kingship over the entire Oromo is unimaginable.Leave alone abput liberation stuggle of a nation,it’e absolutely against Orom norm and safuu.Disgraceful act by bunches of traitors and treacherous.Know your place,or else you will be told.
Must Read: The Atlanta Leadership Convention: A blessing in disguise?
Obbo Y. G ykn hojataa raadiyoo shanee SBO furaa kan turtee fi amma tigree Asmaraa fuutee kan Ugaandaa jirtu Andulam Gamadaa mooralii ittiin beektota oromoo tuffattuu fi cabsitu hin qabdu. Asmaraadhaa dhalaa tigree wal jala fuudhaa wahee qabsoo ololtu. Asmaraa shabiyaaf dalagaa jirtu malee oromoof mit. Bakka oromoon dhaqu ni baqattu. Yakkamtoota shanee
Asmaraa moo Atilaantaatu caalaa Oromiyaatti dhihaata. Dhalaa Faranjii ta ati hudduu arraabdu moo ta Ertiraatu caalaa Oromootti dhihaatawoo? Raqa !
Kkkkkkk kkkkkkk kkkkkkk Qellaam
Arruma akka gaaritti yaada keysan ifa gootee mr Dawid galatomi.
Barru kee wanti ati kakaafte mara warra ati irratti barreesitee caalaa isinuma fakkaata.
1. Malaqa: me isin horii baroottan dheeraaf sobaan guuraa turtan kan qabsaawoonni dheebuufi beelaan bosna keysatti waadamu eysa akka geysitan nuuf ibsitu?
Kan biraa haa hafuu bara 91 -92 keysa horii ummata oromo irraa bilionaan walitti qabattanii nama bira dabree gaalaa fii harreen fe’attan sun eysa akka bu’e ykn eysa akka qabdan nuuf himtuu?
2. Waan hogganaa dubbattan, isin saba oromo isin filee moo Waaqa isin ergee? Hoggana Amanti, kan hawaasa kan barmota tahuullee namaaf hin hayyamtan jechuu? Isin male sabni dhimmaa ofii marihatuu hin dandayu jechuu?
Isin malee QBO warri biraa qabsa’uu hin dandayuu? Isin qofa kontoraata fudhatee?
3. Wa’ee diina waliin dhaabbatuu dubbattee: me if duuba gara galii waanuma isin hojjatu turtanifii ammaas itti jirtan ilaali? Eenyu warri akka sareetti saba ofii facaasee diina jala fiigu nuuf himuu dandeysaa? Kun ammaa beekkamaa akka araada ykn ( addicted) itti taatan sabni marti akka hubatu beekkamaadha. Barruun kee, waan heeddu dubbachuu nama hin barbaachisu ifaadha.
Gabaabdutti, rakkon keysan Sabni kheenya akka jabaatu, tokkummaa qabaatu, qaroomuu fii rorroo jalaa bahu hin feetan.
Wanti irra deddeebitee dollara dollara jettufiis, waan biraa miti, maaf nuuf hin ergine akkuma durgoonu gonaa. Maaf afaan nu qabdanii jechuudha. Akkasumaa mii obbo Dawid?
Wanti nama qaanfachiisu kana. Oromon hegere isaa tifi biyya isaaf walitti dhufee mari’atuun kholkoloo nama hin qaanfachiisu nama boonsa malee. Silaa idda halaala teysee bakka kamiin qaawa argadhee irratti olola oofa irra, achuma deemtee irraa hirmaatte yo feetees challenge gotee, siif wayya.
Mayyirratti, hogganoonni kora kun motummaa wajjin ni mari’atuu jettan? Motummaa tam baantan? Wayyaanee dhaa? Moo dubbiin nubira tartee nu waamaa jettanii itti iyyattanii?
Garuu isaanillee akkuma kheysan Sabni bira khutee jira.
Yaa mr Dawid Oromon qooda ilma namaa hindagatu. Adeemsa QBO keysatti waan tolchitaniif isin galatoonfata tan balleysitan dhiifama isiniif godha. Oftuulummaa dhiisaa qabso dhalotatti dabarsaa.
Itti dabalaan, mr Dawid waan ango irra deddeebitee dubbatte. Eenyu warri aangoo ittiin hin hojjannetti cichaa jiru? Wantumti si baareysee, qaanfachuu dhabdee kora hayyoonni oromo ta’een maqaa balleysa jatte ifuma sabliftee. Kun akka gaaritti akka ati boloola angoof qabdu saaxila.
Barreeffama kee irraa wanti an hubadhu ati nama waan J/Daawud Ibsaa beekuun haa hafuu waanuma Oromoo fi QBO jedhamu nama haasawu dabaree dabree dhagahuu malee (sanumaayyuu warra Daawud hamatu qofatu gurra bira si bahe) waa takka akka ati hin beekne dha.
Dhagahi ! Daawud Ibsaa barreeffama akkanaa barreessuu dhiisiitii dhimma jajjabaa QBO ilaalchisee dhaamsa cuunfaa jajjabaa fi gaggabaabaa isatti ergamuu fi isa irraa ergamu, akkasumaas tel. dhimma QBO jajjabduuf isatti bilbilamuu fi ofii bilbiluufuu yeroon isa hin geessu. Hirriba hin qabu. Raqa akka keetii kanaatu olola isa irratti oofamu qofa dhagahee waan akka ati haasoytuu kana haawawa. Raqa.
Ani asiin Dura ABO isa Qaama shaneen geegeyfamu deeggaruu ture garuu amma wanti naafgale yoo jiraate, osoo warri qabsaawaan dhaaba kana keessa jiruu akka dhaabdi kuni guutumatti warra diinaatiin geegefamu naaf gale kana keessatti ilmaan Oromoo warri dhaaba kanatti amanan akka hedduun isaanii warra kanaan diina harka seenanii lubbuu isaanii dhaban nanhubadha. Keessattuu Da,ud Ibsa baastota Tigree wajjiin ilmaan oromoo irratti badii kana hin jedhamne akka irratti hojjate ni hubatama ,namoota akka Xuruna ka Da,ud wajjiin hojjatee ilmaan oromoo harka Tigree galchee lubbuu nisaanii wareegsise ni hubadha. Ardhas Walgayii Hayyoota Oromoo kana akka fashalamu akka tattaaffii gochaa turantu naa ifa bahe,xalayaa ufii fakkeessanii barreessaniin SBO webside isaaniirratti akka baasanii akka waan warri biraa baase fakkeessudhaan ibsan kunis ifa galaadha, amma garuu wanti heddu waan ifa naaf galee jiruuf isaan kuni diina wajjji ummata oromoo,irratti dalagaa waan jiraniif kana hubannee irraa uf eeguu qabna. Garuu oromoonni akka gaaritti hubatanii jiru waan taheef nama hin geddisiisu.
Akka gaarittin QBO hubadha je”een yaada, wanin kesatti dhaladhee guddadheef. Akka namoonni gariin qabsoon qee’itti itti dhufnaan ayyaan laallata itti dabalamee miti. Raqa waan tahee beytaa dura? Raqni nama kijibni gootee kan akka keeti kana. Warra nama arrabsu malee waa hubatuu hindandeenyee. Warra shaneen dhamaaftee, akka sareetti dutuu malee bu’aa hin qabne. Rakko afaanii qabda natti fakkaata, afaan amaaraa tiin sif irra debisu? Barru koo nama akka kheeti kanaaf barnota guddaa qabaa irra deddeebi’i dubbisi.
Raqni waanuma akka keetii kana. Humaa hin sodaatinii liqimsi kun keetuma.
Warri ati arrabsituu fi mormitu warra QBOf jecha jireenya isaanii wareeganii dha.
Warri ati faarsitu ammoo warra waan qabsoon taateehuu beekuu dhabuu qofa osoo hin taane gariin isaanii warra akeeka diinaa milkeessuuf socho’uu dha.
Kanaaf Raqa jechuun sitti hin guddatu.
Ever again we never go back to old style manipulation by old guards determined to distroy Oromuma and collaborate with habashas for theire personal values and egos. Jowar, Gabisa and co are god gift savour of Oromia they are capable, determined and know what they do.